चिनिमा : ज्ञानकी आदिम नेतृ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मुन्दुम मौखिक ज्ञान परम्परामा आधारित बौद्धिक सम्पदा भए पनि केही दशकअघि नै इमानसिं चेम्जोङको संकलनमा लिम्बू मुन्धुम प्रकाशन भएको थियो । त्यसयता राई भाषाका मुन्दुम पनि प्रकाशन सुरू भए । त्यसमध्ये पछिल्लो चरणमा प्रकाशित ‘मुन्दुम : सृष्टिकथा’ (२०७१) लगायत केही किताबमा ज्ञानकी आदिम नेतृ चिनिमासम्बन्धी रिसिया (श्लोक) संकलित छन्, जसबारे यो लेखमा अझ विस्तृत खोजीसहित छलफल गरिएको छ ।
भाद्र २७, २०७७ भोगीराज चाम्लिङ
मलाई सुरुसुरुमा लाग्थ्यो- मुन्दुम भनेको धामीहरूको रातो भाले खाने मन्त्र हो । यो धारणा मैले लामो समयसम्म आफूमा जोगाएर राखेँ । तर, यो मेरो अवधारणा त्यतिखेर भत्कियो जब मैले इमानसिंह चेम्जोङ र बैरागी काइँलाले सङ्कलन/सम्पादन गरेको लिम्बू मुन्धुमका पुस्तक पढेँ ।
मृतात्मालाई बाटो लगाउन, पितृमा राख्न या घरको शान्ति–सुरक्षाका लागि धामीले मुन्दुम गाउँदै चिन्ता गर्दाको अवस्थाको चित्र । चित्र : अर्जुन खालिङ
किताब पढेपछि मलाई जिज्ञासा पैदा भयो– लिम्बूको ‘मुन्धुम’ मा यस्तो हुँदो रछ, राईको ‘मुन्दुम’ मा चाहिँ के हुँदो रछ ? यही जिज्ञासाले म किरात राईहरूको मुन्दुम सङ्कलन र अध्ययनमा आकर्षित भएँ । अहिले त लगभग मुन्दुमको नशा लागेजस्तै भएको छु ।
अहिले पो थाहा भयो— मुन्दुम खासमा किराती पुर्खाहरूको प्राग्ऐतिहासिक यात्राको कथा हो ∕ उनीहरूका अनेकौं तीतामीठा अनुभव, सिकेका ज्ञान र दृष्टिकोणको मौखिक अभिलेखीकरण हो । अनि हो, समाज सञ्चालनार्थ विकास गरेका सामाजिक–सांस्कृतिक नियमहरूको भण्डारण । अहिले पो थाहा भयो– खासमा धामी भनेको त किराती समाजका प्रथम बौद्धिक हुन् । उनीहरू ज्ञानका व्याख्याता र पुस्ता हस्तान्तरक हुन् । र, धामीहरूले पनि श्रद्धापूर्वक मुन्दुममा उद्धृत गर्ने एउटा नाम छ— चिनिमा । चिनिमा जो किरात राई समाजका लागि ज्ञानकी आदिम नेतृ हुन् ।
यो साउन–भदौ महिनाभरि किरात राई समाजलाई पितृ र प्रकृतिलाई नयाँ अन्न चढाइने छौवा, ढ्वाङ्कुमो इत्यादि संस्कारले खुबै सक्रिय बनाउँछ । प्रकृतिलाई अन्न उब्जाइदिएकोमा धन्यवाद दिइन्छ । पितृले अन्न फलाउन सिकाएकोमा आभार प्रकट गर्दै नयाँ अन्न चढाइन्छ । नयाँ अदुवा चढाइन्छ । अनेकथरि कन्दमूल र सिकारहरू चढाइन्छ । यही मेसोमा आदिम मातृ चिनिमाको नाम पुकार हुने गर्छ ।
मुन्दुमअनुसार, उहिले आकाश भत्किझर्‍यो र धरती बन्यो (राति ताराहरू खसेको देखेर यस्तो सोचे होलान्) । फेरि त्यो धरती च्यातियो र खाल्डो भयो । धरतीले पानी उब्जायो, हावा उब्जायो, रुखपात उब्जायो । खाल्डोमा पानी जमेर तलाऊ भयो, जहाँ लेउ उब्ज्यो । लेउ बढ्दै, कक्रिँदै गयो । कक्रिएको लेउमाथि निगुरो र दुवो उब्जियो । दुवो पाँजिएर तलाउबाट बाहिर भूमि टेकेर झ्याँगियो । निगुरोचाहिँ पानीमै बस्यो र आकाशतर्फ झ्यांगियो । अनि उँधो पानीभित्र जरा झार्‍यो र बूढो भएर मर्‍यो । मरेको निगुरोको फेदमा धमिरा उब्जियो । धमिराले फेदबाट जरा पहिल्याएर खाँदै जाँदा भूमि (माटो) भेट्टायो । धमिराले भूमि खाँदै पानीमाथि माटोको देवल उठायो (सायद धमिराका ठूल्ठूला देवल देखेर यस्तो सोचे होलान्) । त्यसलाई माथिबाट घामको तापले ततायो, तलबाट चिसो पानीले भिजायो । तातो–चिसो भेट भएको ठाउँमा प्रकृतिले नाभी बनायो । नाभिमा चिनिमा उब्जियो । नाभि फुट्यो, देवल उघ्य्रो र माता चिनिमा देखियो । भूमि–प्रकृतिले हावा चलायो । हावाले भेट्नासाथ चिनिमाको सास लाग्यो (जितराज राई, मुन्दुम पाण्डुलिपि) । यसरी पृथ्वीमा पहिलो मानव सृष्टि भयो ।
मानव उत्पत्तिसम्बन्धी मुन्दुममा वर्णित कथामध्ये यो एउटा हो । वैज्ञानिक खोजीले मानव उत्पत्तिसम्बन्धी खास निचोड दिइसकेको अवस्थामा यो कथा समातेर धेरै दाबी गरिरहनु जरुरी छैन । तर, यो कथाको महत्त्व केमा छ भने किरातीहरूमा समग्र सृष्टिलाई कुनै अलौकिक परिघटनाभन्दा पनि भौतिक प्रक्रियाको उपज मान्ने दृष्टिकोण पाइन्छ । त्यसैले उनीहरूको चिन्तन प्राकृतिक भौतिकवाद हो । निश्चय नै उहिलेउहिले यसरी सोच्नु महत्त्वपूर्ण हो ।
किरात राई समाजमा ज्ञानको नेतृत्व गर्ने कोही छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा किरात राई प्रज्ञा परिषद्को आयोजनामा थुप्रै चरण अन्तर्क्रिया भएको थियो । त्यो अन्तर्क्रियाले निचोड दिएको थियो—चिनिमा ज्ञानकी आदिम नेतृ हुन् ।
मेरो अहिलेको ‘हाइपोथेसिस’ (आकलन) के हो भने सबै भाषी राईहरूमा चिनिमाको अवधारणा पाइन्छ । केही सङ्कलित मुन्दुम, चिनिमासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा प्राप्त जानकारी र सङ्कलित मुन्दुमका आधारमा यस्तो आकलन गरिएको हो । मैले नै २०७५ सालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको सोताङ–गौरीटारका नाछिरिङ धामी भोटुधन राईबाट सङ्कलन गरेको मुन्दुममा प्रस्टसँग चिनिमाको उल्लेख छ ।
अन्तर्क्रियामा विष्णुभक्त राईले पनि नाछिरिङ राईमा चिनिमासम्बन्धी अवधारणा रहेको बताएका थिए । मैले नै २०७६ सालमा सोलुखुम्बुको मुक्लीबाट सरेर उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकामा बसोबास गरिरहनुभएको थुलुङ धामी (सेलेमी) तुलबहादुर राई (वर्ष ८४) ले ‘मामाबुङ चिनिबुङ’ भनेर सम्बोधन गर्नुभएको मुन्दुम सङ्कलन गरेको छु । उहाँकै शब्दमा भन्दा चिनिबुङ भनेको ‘आमा पनि उही हो, बाबु पनि उही हो ।’ त्यस्तै मैले नै चाम्लिङ धामीहरूबाट पनि मामा (आमा) चिनिमा र मामा चिनिबुङ भनेर सम्बोधन गरेको मुन्दुम सङ्कलन गरेको छु । मुन्दुमी भाषामा आदरपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्दा ‘बुङ’ शब्द प्रयोग हुन्छ ।
बुद्धिकुमार ह्वङ्गुका अनुसार, बाहिङहरूले सेग्रो गर्दा मुन्दुममा चुनिमो भनेर रिसिया गायन गर्छन् । बाहिङहरू जन्म दिने आमालाई चुनिमो भन्छन् । बुद्धिकुमार ह्वङ्गुले नै सङ्कलन गरेर प्रकाशन गर्नुभएको मुन्दुममा पनि ‘मामा चुनिमो’ (किरात बाहिङ–बायुङ तुम्लो, २०६९, पृष्ठ १५६) भनेर उल्लेख छ ।
खालिङ मुन्दुममा ‘म्याम्या च्युन्यु’ (बुद्धिकिरण खालिङ, ख्याल् तम्र : खालिङ मुन्धुम, पृष्ठ १६) भनेर सम्बोधन गरिन्छ । खालिङ संस्कृतिबारे मानवशास्त्रीय अध्ययन गरिरहेका जंग राईका अनुसार खालिङ राईमा ‘अ ऽऽऽ म्यम्य च्युन्यु बव कुचेवी गो’ अर्थात् ‘आमा चुन्युको काखमा पो हामी यसरी बोल्दै छौं, खाँदै छौं’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ (फेसबुक संवाद, २०७५ असोज ७) । चिनिमासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा भीम राईले बताएअनुसार, दुमीहरू राईहरूले पनि मुन्दुममा चुनुमा, चुनुम्मा भनेर सम्बोधन गर्छन् । त्यस्तै कुलुङ राईहरूमा चुनुमा भनेको ‘आफूभन्दा माथिको महिलालाई आदरपूर्वक सम्बोधन/प्रयोग गर्ने शब्द’ हो (भूपध्वज थोमरोस्, कुलु–नेपाली रिङबउ, २०६२, पृष्ठ ४८) ।
किरात राईहरूका लागि चिनिमा आमा पनि हुन् र गुरुआमा पनि । आफूले थुप्रै कुरा सिकेर सिकाएका कारण नै आदिम मातृ चिनिमालाई ‘चिनिमा’ भनिएको हो । किरात राई भाषामा सिक्नु, सिकाउनुजस्ता ज्ञानसँग सम्बन्धित शब्दहरूबाट पनि यही निचोड निस्किन्छ ।
जस्तो कि कोयू राई भाषामा सिकाउनुलाई ‘चेन्मु’ भनिन्छ ।
जस्तो कि खालिङ राई भाषामा सिक्नुलाई ‘चेइसिने’ र सिकाउनुलाई ‘चेइन्या’ भनिन्छ ।
जस्तो कि चाम्लिङ राई भाषामा सिक्नु, सिकाउनुलाई ‘चिन्मा, चिःमा, चैमा’ भनिन्छ ।
जस्तो कि दुमी राई भाषामा थाहा पाउनुलाई ‘चुनो’ भनिन्छ । (नेत्रमणि राई, दुमी–नेपाली–अङ्ग्रेजी शब्दकोश, २०६८, पृष्ठ ६३, ६५) ।
जस्तो कि वाम्बुले राई भाषामा एउटा उखान छ ‘चिमा ना पामा’ अर्थात् जान्नु न तान्नु, बुझ्नु न सुझ्नु (अविनाथ राई, वाम्बुले राई शब्दकोश, २०५७, पृष्ठ १०४) । ‘चिमा’ भनेको जान्नु, बुझ्नु हो वाम्बुले राई भाषामा । त्यस्तै सिकाउनु, प्रशिक्षण दिनुलाई ‘चेईचाम’ भनिन्छ !
जस्तो कि थुलुङ राई भाषामा जान्नु–बुझ्नुलाई चमु ∕ सिकाउनु, तालिम दिनुलाई चेमु भनिन्छ (पाँचवीर थुलुङ र अन्य, थुलु–नेपाली लेम्वाखाजेप : थुलुङ–नेपाली शब्दकोश, २०६७, पृष्ठ ५१, ५६, ५७) ।
जस्तो कि बान्तावा राई भाषामा सिक्नुलाई ‘चिन्माचिन्’ भनिन्छ ∕ (सहरमान देशामुन माङ्फाङ, वान्तावा भाषा शब्द संग्रह, २०७२, पृष्ठ ११४–११५) ।
जस्तो कि बाहिङ राई भाषामा सिक्नुलाई ‘चेँस्सो’ र शिक्षकलाई ‘चेना’ भनिन्छ ।
जस्तो कि याम्फू राई भाषामा सिक्नु र सिकाउनुलाई ‘चिन्मा’ भनिन्छ ।
चिनिमासम्बन्धी अवधारणा सबै भाषी किरात राईहरूमा छ भन्ने बलियो भाषिक तथ्य हुन् यी । तर, थप खोजी भने जरुर आवश्यक छ । भाषाशास्त्री डा. तारामणि राईका अनुसार, सिक्नु–सिकाउनुसँग सम्बन्धित यी थुप्रै शब्दहरूको मूल अर्थात् आद्य (प्रोटो) रूप ‘चिन्मा’ हो जुन अहिले बान्तावा र याम्फू भाषामा प्रयोग भइरहेको छ । ‘चिन्मा’ शब्दमा बीचको ‘न्’ मा स्वर वर्ण ‘इ’ थपिएर चिनिमा बनेको हो । यही प्रक्रियाबाट कुलुङ भाषामा ‘चुनुमा’ भयो । दुमी र बाहिङमा चुनिमो भयो । खालिङमा चाहिँ च्युन्यु भयो । चाम्लिङ र थुलुङमा चिनिबुङ पनि भयो । यसरी भाषिक भेदका कारण निकटत्तम भिन्नता निर्माण भए पनि चिनिमा नाम सिक्नु, जान्नु र सिकाउनु जस्ता ज्ञानसँग सम्बन्धित छ । यस अर्थमा चिनिमा किरात राईहरूका लागि ज्ञानकी आदिम नेतृ हुन् ।
त्यसो भए चिनिमाले किरातीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको ज्ञानचाहिँ के हो त ?
मैले आजसम्म थाहा पाएअनुसार, किरात राईहरू चार तरिकाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्छन्— हेरेर, सुनेर, सिकेर र गरेर । चिनिमाले यही चार तरिकाले ज्ञान आर्जन गरेको व्याख्या मुन्दुममा पाइन्छ ।
धामीहरूले आफ्ना गुरुहरूको पुकार गर्दा सुरुमा कोकुमा–पिरिमा (बजु–बराजुनी) को पुकार गर्छन् । यस आधारमा मुन्दुमको रचना पनि महिलाबाटै भयो कि भन्न सकिन्छ । मुन्दुमी मिथकमा त चिनिमाले नै मुन्दुम गर्न सिकाइन् भन्ने प्रस्टै उल्लेख भएको पाइन्छ । मुन्दुमअनुसार, चिनिमाको ज्ञानको प्रथम स्रोतचाहिँ प्रकृति र पशुपन्छी हो । चिनिमाका गुरुहरू चरा स्वरूपका कोकुमा–पिरिमा (बजु–बराजुनी), प्रकृतिका रूपमा हैखामा (धरती) र नियामा (आदिम थलो) हुन् । यो अवधारणालाई एडवार्ड बी. टाइलरले ‘प्रिमिटिब कल्चर’ पुस्तकमा जीवात्मवाद (एनिमिजम्) भनेर नामकरण गरेका छन् । यो आदिम अवधारणामा सजीव–निर्जीव प्रकृति, प्राकृतिक वस्तु र पशुपन्छीमा आत्मा हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ र तिनलाई मानव समान या मानव स्वरूप मानेर मानवीकरण गर्छ ।
के पनि भनिन्छ भने माता चिनिमाले आगोको प्रयोग गर्न जानिन् । मुन्दुमअनुसार, उनी बसेको ठाउँमा डाला जोडिएका रूख मरे । हावाले ती रूखहरू हल्लाउँदा डाला घोटिएर आगोको फिलिङ्गो निस्कियो र डढेलो लाग्यो । चिनिमा आगोको नजिक गइन् तर तातो भएपछि डराएर पछि हटिन् । फेरि आगो ताप्न मन भएर बलेको आगो पछ्याइन् र आगो प्रयोग गर्न सिकिन् । मुन्दुमअनुसार, चिनिमाले सुरुमा जंगली अन्न सायुङ्मा (सामा) टिपेर खाइन् । उनले कालीकागुनी पनि यसरी नै खाइन् । असर नगरेपछि खेती गर्न सुरु गरिन् । यसको प्रभावस्वरूप किरात राईहरूमा सायुङ्मा र कागुनीलाई पितृलाई चढाउने पवित्र अन्नका रूपमा लिइन्छ । धेरैले मुन्दुममा मात्रै उल्लेख गर्ने यी अन्न वाम्बुले राईहरूले अहिले पनि ढ्वाङ्कुमो संस्कार गर्दा प्रयोग गरिरहेकै छन् ।
मुन्दुमअनुसार, माता चिनिमाले चितुको जरा पिसेर कालिकागुनीको पिठोमा मुछेर मर्चा (खाबै) बनाइन् । मर्चाबाट जाँड बनाइन् । शिवराज राई (खोटाङ) ले गायन गर्ने मुन्दुमको रिसियामा यसो भनिन्छ– ‘हय नाइम्मा–चिनिमावा/हय खामाहों लिस्यु कुन्योउ/खामावा चादिम् लिस्यु कुन्योउ’ अर्थात् ‘नाइम्मा–चिनिमाले मर्चा बनाए है/मर्चाले जाँड बनियो है’ (मुन्दुम : सृष्टिकथा, पृष्ठ ७९) । त्यस्तै कम्पध्वज राई (खोटाङ) ले गायन गर्ने मुन्दुमकै रिसियामा यसो पनि भनिन्छ– ‘नियामाडा धिरिचामो खामाटो लिसानो, मामा चिनिमावा लिस्युन खामाटोवा चिस्युको’ अर्थात् ‘नियामा भन्ने ठाउँमा सायुङ्माको मर्चा बनियो, माता चिनिमाले मर्चा प्रयोग गरेर (जाँड) बनाइन् ।’ स्वाभाविकै हो कि अन्न बटुल्ने, खेती गर्ने महिलाले नै खानेकुरा पनि बनाइन् । र, त्यही क्रममा जाँड आविष्कार भयो । जाँड पनि मानव जीवनका लागि सानो आविष्कार होइन ।
मुन्दुमअनुसार, चिनिमाले पत्करहरू जम्मा गरेर बस्ने ठाउँ बनाइन् । कपास छरेर तान लगाएर कपडा तयार गर्न सुरु गरिन् । उनले नै चिन्डो सच्याएर प्रयोग गर्न सुरु गरिन् । सुरुमा चिन्डो पानी भर्ने भाँडोका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले संस्कारको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ र किरात राईहरूको सांस्कृतिक प्रतीक पनि । फेरि पनि भनौं, त्यसैले त माता चिनिमा ज्ञानकी आदिम नेतृ हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ १३:०८
गोपालप्रसाद रिमालको निधनलगत्तै सन् १९७३ अगस्ट २३ मा पीताम्बर शर्माले आहत भएर चिठी लेखेका मात्र होइनन्, रिमालबारे समालोचकहरुले अहिलेसम्म व्यक्त गरेका अधुरा विचारभन्दा निकै गहिरो गरी रिमालको महत्त्वलाई यस सानो चिठीमा रेखांकित गरेका छन् ।
भाद्र २७, २०७७ श्यामल
नियुक्तिकर्ताका दृष्टिमा थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेर चित्त नबुझी पदत्याग गरेका ‘घमण्डी’ वा केहीको दृष्टिमा त्यस्तो ठाउँमा नबसेर ठीक गरेको ‘स्वाभिमानी व्यक्ति’ । संयुक्त अधिराज्यको एडिनबर्ग विश्वविद्यालयबाट सहरी योजना डिजाइन तथा क्षेत्रीय योजनामा एमएस्सी गरेका र अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट सहरी तथा क्षेत्रीय योजनामा पीएचडी गरेका विद्वान् । स्वभावले अत्यन्त सरल र सहृदयी तर केहीका दृष्टिमा ‘अरूलाई सजिलै नटेर्ने’ मानिस ।
हर्क गुरुङका चेला यिनै भूगोलविद्/योजनाविद्/प्रोफेसर डाक्टर पीताम्बर शर्मामा आजभन्दा ४७ वर्षअघि नै कति गहिरो कलाचेत थियो, कति बलियो समालोचकीय दृष्टि थियो र समाजको परिवर्तनप्रति कति बलियो निष्ठा थियो भन्नेबारे कमैलाई थाहा होला । ‘द राइजिङ नेपाल’ मा उनले सम्पादकलाई लेखेको चिठीबाट उनको व्यक्तित्वको अर्को पाटो पनि उघ्रिन्छ ।
गोपालप्रसाद रिमालको निधनलगत्तै सन् १९७३ अगस्ट २३ मा शर्माले आहत भएर चिठी लेखेका मात्र होइनन्, रिमालबारे समालोचकहरूले अहिलेसम्म व्यक्त गरेका अधुरा विचारभन्दा निकै गहिरो गरी रिमालको महत्त्वलाई यस सानो चिठीमा रेखांकित गरेका छन् । उनले रिमाललाई उनका समकालीनभन्दा पृथक् र अद्वितीय प्रतिभा मानेका छन् । उनले अद्वितीय भन्नुका तीन कारण छन् ।
पहिलो, रिमाललाई नेपाली युवाहरूसँग हृदयबाटै संवाद गर्न सक्ने प्रतिभा मान्छन् शर्मा । हुन पनि उनको ‘आमाको सपना’ ले युवाहरूको मनमस्तिष्कलाई जसरी तरंगित तुल्याएको थियो, त्यसरी न लेखनाथजस्ता पूर्वीय शास्त्रीयतावादी कविका रचनाले गर्न सकेका थिए, न आधुनिक चेतका पश्चिमा साहित्यका ज्ञाता देवकोटाजस्ता सर्वतोमुखी प्रतिभाका कविताले । समका नाटकमा कहीं कतै नभएको विद्रोह रिमालको मसानले आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेकी नेपाली युवा नारी हेलेनमा छ । यी महान् त्रयीका तुलनामा रिमाललाई यसरी विशिष्ट देख्छन् शर्मा ।
दोस्रो, रिमालको भाषामा पहिलोपल्ट नेपाली समाजको दैनन्दिनी र सरल भाषाले प्रवेश पाएको ठम्याइ छ शर्माको । ‘आमाको सपना’ लगायत ‘.......प्रति’ र ‘परिवर्तन’ जस्ता कवितामा प्रयुक्त भाषाबाट यसको पुष्टि हुन सक्तछ । ‘छोरा, त्यो हुरी भएर आउने छ, तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ’ जस्ता जनभाषाको प्रयोग यिनमा भएको छ । परिवर्तन शीर्षकको कविताको भाषाले यस्तै बलशाली काव्य भाषाको प्रतिनिधित्व गर्छ । तसर्थ शर्मा भन्छन्, ‘उहाँका कविताले सुन्दर, सरल र क्रान्तिकारी जोसका बलशाली भाषा बोल्छन् ।’ रिमालका कविताले मानिसलाई कायर हुनबाट बचाउँछन् र तिनका मानसमा बृहत् मानवताको हितका निमित्त बलिदानको भावना भर्छन् ।
तेस्रो, शर्मा भन्छन्, ‘रिमालको निधनबाट २००७ सालअघिको आत्माको महान् प्रतिपादक सदाका लागि मौन भएको छ ।’ त्यो आत्मा के थियो र किन शर्माले रिमाललाई ‘२००७ सालअघिको आत्माको महान् प्रतिपादक’ माने ? के लेखनाथको ‘पिँजडाको सुगा’, देवकोटाको ‘शाहजहाँको इच्छा’ वा बालकृष्ण समको ‘इच्छा’ अथवा यस्तै अन्य कृतिले त्यस आत्मालाई यति बलियो गरी प्रस्तुत गरेका छन् जति रिमालकी आमाले समातेकी छन् ?
बाहिरी विश्वबाट अलग राखिएको नेपाल जहानियाँ राणातन्त्रको कालकोठरीमा बन्द थियो । मानिसको कुनै भाउ थिएन । न्याय र कानुन राणाका तजबिजमा थियो । एक भयानक उकुसमुकुसमा नेपाल निस्सासिइरहेको घोर अमानवीय समय थियो त्यो । त्यस्तो अव्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्न उद्यत अगुवामध्ये थिए रिमाल । त्यसैले रिमाल त्यस युगको विद्रोही आत्मा थिए । उनले विद्रोहको कलात्मक पुनर्सिजन गरे कविता र नाटकका माध्यमबाट, उनले सामाजिक जागरणका विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट विद्रोहको भावलाई संगठित गरे, उनले राजनीतिक दलका माध्यमबाट त्यस आत्मालाई प्रकाशित गरे । उनले सात सालअघिको कुण्ठित आत्माको उद्धार गरे । यसरी एक साधारण नागरिक असाधारण विद्रोहीमा रूपान्तरित भयो । डा. शर्माले आजभन्दा ४७ वर्षअघि लेखेको यस चिठीले हामीलाई रिमाललाई हेर्ने परम्परागत समीक्षकीय दृष्टि बदल्न प्रेरित गर्छ, उनको पुनर्मूल्यांकनको माग गर्छ र उनको सपनाको पुनरुत्थानको सम्भावना देखाउँछ ।
वर्षौंअघि जनआन्दोलनको जुलुसबाट हामी सँगै पैदल घरतर्फ फर्किरहेका बेला मैले डा. शर्मासँग यस पत्रलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति लिएको थिएँ । विलम्बका लागि म क्षमा चाहन्छु । अंग्रेजी भाषामा लेखिएको यो चिठीको नेपाली अनुवाद प्रस्तुत छ । मेरो कमजोर
अनुवाद कौशलका कारण अन्यथा हुन गएमा डा. शर्माले मलाई क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । रिमालप्रति श्रद्धाञ्जली !
तर, एक्ला नक्षत्र
द राइजिङ नेपालको ‘सम्पादकलाई चिठी’ मा पीताम्बर शर्मा
व्यक्तिगत रूपमा स्व. गोपालप्रसाद रिमाललाई नचिने तापनि मैले उहाँको निधनबाट यस देशलाई र अझ भन्ने नै हो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा क्षति पुगेको अनुभव गरेको छु ।
कवि र नाटककारका रूपमा रिमाल निःसन्देह नेपालका महान् साहित्यकारहरूमध्येमा हुनुहुन्थ्यो । देवकोटाको झैं सर्वतोमुखी प्रतिभा नभए पनि अथवा लेखनाथका झैं शास्त्रीय विवेकका हृदयबाटै संवाद गर्न सक्ने प्रतिभा नभए पनि रिमाल नेपाली युवाहरूसँग आफ्ना कुनै पनि समकालीनहरूभन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो । ठेलीका हिसाबले भलै उहाँको योगदानलाई सजिलै बिर्सन सकिएला, तर उहाँको अपवादजन्य गुणलाई बिर्सन सकिँदैन । उहाँका कवितामा त्यसरी निपुणताका साथ अभिव्यक्त भएका आशा, विचार, निराशा, र अझ त्यसभन्दा माथि उहाँको अति बलियो आशावादलाई आधुनिक नेपाली कविहरूले अनुकरण गर्नुपर्छ । उहाँका हातबाट नेपाली भाषा र नेपालका सामान्य दैनन्दिनीका वस्तुहरूले प्राधान्यता पाएका छन् जसले बहुधा यसअघि वा पछि यस स्तरमा पाएका थिएनन् । उहाँले आफ्नो एउटै कविता ‘आमाको सपना’ बाट आधुनिक नेपाली कविहरूमा सम्मानित स्थान आर्जन गरेको हुनुपर्थ्यो ।
उहाँजस्तै उहाँको शैली र उपमा, मुहावरा र व्यंग्य पनि सबै विशिष्ट नेपाली छन् । गद्य कविताका प्रथम प्रयोक्तामध्येका एक उहाँका कविता त्यस परम्परामा उत्कृष्ट श्रेणीमा रहनेछन् । नाटककारका रूपमा उहाँको ‘मसान’ ले नेपाली नाटकको इतिहासमा विशिष्ट स्थान राख्नेछ । आखिर, यी दशकहरूमा पनि उपयुक्त ढंगले ‘मसान’ को मञ्चन हुन सकेको छैन र यो नाटक हाम्रो कलाको टाटपल्टाइबारे हामीले जब सोच्ने बेला आउला, त्यसका लागि खुराक बनिरहनेछ ।
कविका रूपमा रिमाल पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो । र, यस अर्थमा उहाँ सदैव इमानदार हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कविताले सुन्दर, सरल र क्रान्तिकारी जोसका बलशाली भाषा बोल्छन् । उहाँ खोक्रो प्रचारवादी हुनुहुन्थेन । रिमाल यस्ता कवि हुनुहुन्थ्यो जसले बुद्धि र मुटु दुवैलाई प्रदीप्त तुल्याउनुभयो । मलाई लाग्छ, रिमालले खिचेको आमाको दिमागको चित्र मातृत्वप्रति कुनै पनि मानिसले प्रकट गरेको एक महान् श्रद्धाञ्जलीका रूपमा रहनेछ । कविका रूपमा रिमालका अत्यावश्यक मानवीय गुणहरूले जीवनलाई सिञ्चित तुल्याउँछन् । मानसिक रोगले गर्दा उहाँको साहित्यिक जीवन असमयमै छोटिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । त्यसका लागि पनि आंशिक रूपमा हामी आरोपित हुन सक्छौं । पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँ आफ्नै दुनियाँमा सीमित हुनुभयो तथापि कविका रूपमा उहाँको स्वर स्वतन्त्रताका खातिर अद्वितीय थियो ।
मैले स्वर्गीय रिमालजत्तिकै आफ्नो उद्देश्यप्रति यति गहिरो संवेदनशीलता, नैतिकता र बौद्धिक निष्ठा भएका अन्य कवि देखेको छैन । त्यसैले उहाँ नेपाली युवाहरूको हृदयको स्पन्दनको अति नजिक हुनुहुन्छ । उहाँको काव्यिक र बौद्धिक उडानले देवकोटाका झैं बाटो बिराएन । उहाँले लेखनाथले जस्तो नैतिक विमर्श हराउनुभएन । उहाँका नाटकहरू समका नाटकजस्तो बनिबनाउ विश्वासको बौद्धिक अभ्यासमा रुमल्लिएका छैनन् । देवकोटा, लेखनाथ र समको त्रयी निश्चय नै नेपाली साहित्यका ज्वाजल्यमान नक्षत्र थियो तर एक्ला नक्षत्र रिमाल ज्वाजल्यमान रहनुहुनेछ र हामीलाई बाटो देखाइरहनुहुनेछ ।
निश्चय नै, भावी दिनमा हाम्रो साहित्यिक परम्पराका उत्तराधिकारीहरूले नेपाली साहित्यलाई योगदान गर्ने रिमालजस्ता कुनै साहित्यकार पनि थिए भनी गर्व गर्नेछन् । हाम्रा कथित ‘कविहरू’ मध्ये धेरै विस्मृतिमा गइसकेको धेरै कालपछि पनि त्यसरी गर्व गरिनेछ ।
रिमालको निधनबाट २००७ सालअघिको युगको आत्माको महान् प्रतिपादक सदाका लागि मौन भएको छ । हाम्रा युवा कविहरूले रिमाललाई सुहाउँदो श्रद्धाञ्जली दिने हो भने रिमालले ल्याउन योगदान गरेको पुनर्जागरणको अर्को थालनी गर्नुपर्छ । अहिलेलाई उहाँको स्मृतिमा एक साहित्यिक मञ्चको सिर्जना गर्न सकिन्छ र उहाँको नाममा उहाँको टोलको नाम राख्न सकिन्छ । यसले हामीलाई अझैं यथार्थ नबनिसकेको ‘आमाको सपना’ लाई सम्झाउनेछ ।
पीताम्बर शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर
अक्टुबर २५, १९७३
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ १२:४९